Kugadzirisa Kurwadziwa Kwako Kusingaperi seWiricheya Mushandisi | KarmanHealthcare.com
Kurwara kusingagumi ichokwadi chinosuruvarisa chehupenyu icho vazhinji vanoshandisa mawiricheya vanobata nacho zuva nezuva. Dzimwe nguva kurwadziwa kunoenderana ne kuipa uye dzimwe nguva zvine chekuita nekugara muwiricheya kwenguva yakareba. Nechinofadza, kune dzimwe nzira dzekugadzirisa marwadzo dziripo dzinogona kushanda zvakanyanya kune vanoshandisa mawiricheya.
Pane kusarudzwa kukuru kwemidziyo nemidziyo inogona kukubatsira kubata marwadzo ako asingaperi semushandisi wewiricheya. Chekutanga chemidziyo yekufunga nezvayo iwiricheya yako. Ichiri kukukwanira here? Pane zvigadziriso zvingaitwa pawiricheya yako kuti ubvise mamwe emarwadzo aunosangana nawo here? Semuenzaniso, kuisazve tsoka dzako kunogona kugovera kudzvanywa uye kupa zororo. Kana tsoka ikagara pawiricheya yako isingagone kugadziriswa, ndiko kugadzirisa kunogona kupa zororo rekurwadziwa.
Iwe unogona zvakare kuwedzera macushion kunzvimbo dzakasiyana dzewiricheya yako kuti iwedzere kugadzikana uye kudzoreredza mamwe ekumanikidza. Iwe unogona kuwedzera makushion ekutsigira lumbar uye lateral side rutsigiro. Customized pekugara isarudzo inogadzirwa kuti igadzirise mapoinzi ekumanikidza akasarudzika kwauri.
Chinzvimbo chako chinogona kukanganisa zvakanyanya padanho rako rekurwadziwa kusingaperi. Semuenzaniso, chimwe chinhu chakareruka sekuyambuka makumbo ako nguva nenguva chinogona kubvisa kumanikidza kunokonzera kurwadziwa. Kugadzirisa kukwirira kwetsoka dzako kunozorora kana kutsamira kwechigaro chako zvese zviri zviviri zvidiki shanduko dzinogona kuita mutsauko mukuru. Iwe unogona kunge wakagadzira dzimwe tsika dzakaipa nekufamba kwenguva zvine hukama nechinzvimbo chako. Kuchinja nemaune chinzvimbo chako kunotora nguva uye nesimba asi zvinogona kuva nemhedzisiro yakanaka padanho rako rekurwadziwa kusingaperi.
3. Kurapa kwepanyama uye kwekushanda
Semunhu anoshandisa wiricheya, unogona kunge wakajairana nekurapa kwemuviri nekwebasa. Varapi vanogara vachishanda nevanhu vakakuvara kuti vadzorere simba uye kukudziridza hunyanzvi hutsva. Zvinokwanisika kuti mamwe emarwadzo ako asingagumi anogona kusunungurwa kuburikidza nemhando imwe chete kana maviri ekurapa. Unogona kunge wapera kushandisa zvimwe zvikamu zvemuviri wako kutsiva yako kuipa. Kupfuura kana kushandiswa zvisina kunaka kunogona kutungamira ku kuipa uye kurwadziwa kusingaperi. Kana zvirizvo, murapi wepanyama anogona kukwanisa kubatsira.
Iwe unogona zvakare kunge uri kupa kune ako marwadzo asingagumi nekuzadza mabasa ezuva nezuva zvisirizvo. Mushandi wepabasa anogona kukudzidzisa nzira dzekugadzirisa mabasa ehupenyu hwezuva nezuva kuitira kuti iwe uzviite zvakasununguka uye pasina zvimwe kuipa.
3. Kupindira kwechiremba
Ungangoda kubatanidza nzira dzambotaurwa dzekugadzirisa kurwadziwa kusingaperi nekupindira kwekurapa. Taura nachiremba wako nezve sarudzo iwe dzawakavakirwa pane yako kuipa uye kurwadziwa. Kupindira kwekurapa kunogona zvakare kukupa iwe zororo rechinguva iwe raunoda kuti ushande kuburikidza nekumwe kwekukuvara mukurapa kwepanyama.
Rondedzero iyi inzvimbo yekutanga yekudzidza nezve kugadzirisa marwadzo ako asingaperi semushandisi wewiricheya. Ivo vanochengeta uye vashandi vekurapa mu upenyu hwako ungangove uine nzwisiso kune dzimwe sarudzo dzekukubatsira iwe kugadzirisa marwadzo ako.